Skype 5.9.0.123 Final & Business Edition...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Skype 5.9.0.123 Final & Business Edition လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! မြန်မာပြည်မှာလည်း Skype သုံးရတာ အဆင်ပြေနေသောကြောင့် တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! Skype အကြောင်း သူငယ်ချင်းတို့လည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ...! လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ကျွန်တော် အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 24.26 MB )
အသိပညာ အတတ်ပညာ တိုးပွားနိုပါစေ...!
1 Response to Skype 5.9.0.123 Final & Business Edition...!